KASHIFAAD: Maraykanka oo ”jilbaha qabsaday Imaaraadka” & kulan la qariyey oo dhacay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka KASHIFAAD: Maraykanka oo ”jilbaha qabsaday Imaaraadka” & kulan la qariyey oo dhacay
KASHIFAAD: Maraykanka oo ”jilbaha qabsaday Imaaraadka” & kulan la qariyey oo dhacay
(Hadalsame) 14 Abriil 2022 – Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, Antony Blinken, ayaa raalligelin siiyey Dhaxal-sugaha Abu Dhabi Mohammed bin Zayed intii lagu guda jirEy kulan ay ku yeesheen Morocco bishii hore, Axios ayaa sidaas lashifay Khamiistan.
Raalligelinta Blinken ayaa sida muuqata loola jeedey in lagu hagaajiyo xiriirka Maraykanka iyo Imaaraadka ee ku aaddan jawaabtii qaboobayd Washington ee weerarkii Jannaayo lagu qaaday Imaaraadka Carabta ee ay gaysteen fallaagada Xuutiyiintu.
Intii uu socdey kulanku, Blinken wuxuu qirtay in jawaabta Maamulka Biden ee weerarkaasi aysan ahayn mid ku fillayd oo misna deg deg ah wuxuuna sheegay inuu ka xun yahay, sida laga soo xigtay ilo-wareedka Axios.
“Xoghayuhu waxa uu si cad u sheegay in uu si qoto dheer u qiimaynayno iskaashiga aanu la leenahay Imaaraadka Carabta iyo in aanu sii wadi doono in aanu garab istaagno asxaabteenna si aan uga hortagno khataraha caamka ah oo naga dhexeeya,” sarkaal sare oo aan la magacaabin oo ka tirsan Waaxda Arrimaha Dibedda ayaa xogtaa la wadaagey barta wararka ee Axios. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo arrimaha diblamaasiyadeed ee gaarka ah ee uu madaxiisa isweydaarsadeen Imaaraadka.
Bishii Jannaayo, fallaagada Xuutiyiinta Yemen ayaa diyaarado aan duuliye lahayn u soo dirtay caasimadda Imaaraadka halkaasoo ay ku dileen 3 qof, 6 kalena ku dhaawacmeen.
Fallaagada Xuutiga ayaa sheegatay in duqeyntan ay ugu aargudeysey taageerada Imaaraadka Carabta ee xulafada caalamiga ah ee duqeymaha ka wada dalkaasi.
Isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa duqeymo kale oo dhanka cirka ah deeto ka fuliyay dalka Yemen oo ay ku dileen in ka badan 60 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qofi.
MW Maraykanka ee Joe Biden ayaa xilligii uu ololaha ku jirey si aan xushmad lahayn uga hadlay dalalka Khaliijka oo uu sheegay inuu ula dhaqmayo sidii dalal fongoran oo dunida ka go’an, isagoo adeegsadey tibixda ”Pariah.”
Wuxuuna deeto markii uu guulaystey hoos u dhigay la macaamilka Dhaxa-sugayaasha Sucuudiga iyo Imaaraadka ee MBS & MBZ, kuwaasoo ka aarsaday markii ay maalin dhowayd telefoonka ku dhegeysteen kaddib duullaankii Ruushka ee Ukraine oo looga baahday inay sare u qaadaan wax soo saarka shidaalka oo ay iyana diideen ilaa haatan.
Previous article“Ficilkaagu waa mid laga xanaaqo!” – Jarmanka oo ka xumaaday bahdil ay Ukraine u gaysatey & arrin ay xusuusiyeen
Next article”Maxaannu yeelnaa?!” – Sweden & Finland oo markii ugu horreeysey si heer sare uga shiray ku biirista NATO (Maxaa ka jira inay Juun ku biirayaan?)